३ वा ४ सिलिन्डर इन्जिन भएकाे गाडीमा के फरक ? कुन कार किन्नु उपयूक्त - MeroAuto
३ वा ४ सिलिन्डर इन्जिन भएकाे गाडीमा के फरक ? कुन कार किन्नु उपयूक्त
2075:12:7 10:46 AM
काठमाडौं । पहिले–पहिले कारहरुमा ४ सिलिन्डरको इन्जिन मात्र प्रयोग हुने गथ्र्यो । तर, आजकल नयाँ कम्पनीहरुले कारहरुमा ३ सिलिन्डर यूक्त इन्जिनको व्यापक प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
टाटाले आफ्नो सबैभन्दा सस्तो कार नानोमा भने २ सिलिन्डर इन्जिनको प्रयोग गरेको थियो । परम्परागत कार कम्पनीहरु टोयोटा, हुन्डाई, कियाका कारहरुमा अहिले पनि चार सिलिन्डर इन्जिनको प्रयोग भइरहेका छन् । तर, अहिले नेपाली बजारमा अग्रेसिप बजार बिस्तार गरिरहेका टाटा, फोर्ड, निसान, रेनो जस्ता कम्पनीहरुले आफ्ना कारहरुमा ३ सिलिन्डर इन्जिन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
३ वा ४ सिलिन्डर इन्जिनमा कुन राम्रो ? कुन पावरफुल ? कुनको मेन्टिनेन्स कस्ट कम ? कुनले बढी माईलेज दिन्छ ? आदि प्रश्न आम उपभोक्ताको मनमा उठेको हुन्छ ।
आजका सबै इन्जिनहरु फोर स्ट्रोकमा फङ्सन हुने गरेका छन् । फोर स्ट्रोक भन्नाले सिलिन्डर भित्र हुने चारवटा फङ्सनलाई बुझ्नु पर्छ । जसमा फियुल इनटेक, कम्प्रेशन, कम्बस्चन र एग्जस्ट रहेको हुन्छ ।
३ वा ४ सिलिन्डर लहरै हुँदा, पहिलाे सिलिन्डरमा इनटेक, दास्रोमा कम्प्रेसन, तेस्रोमा कम्बस्चन (पावर) र चौथोमा एक्जस्टको काम भईरहेको हुन्छ । यी ४ वटा स्ट्रोकमा तेस्रो स्ट्रोकमा मात्र पावर जेनरेट हुने गर्छ । सिलिन्डरहरुमा पालैसँग पहिलो, दास्रो, तेस्रो र चौथो सिलिन्डरमा पावर उत्पन्न हुने भएकोले ४ सिलिन्डरको इन्जिन ३ सिलिन्डर भएको इन्जिन भन्दा ज्यादा रिफाइन हुने गर्छ ।
३ सिलिन्डर इन्जिन
यसमा इन्जिनको सिलिन्डर ३ वटा हुने गर्छ । जसका कारणले केही बढी भाइब्रेसन र आवाज महसुस हुने गर्छ । तर, तीन सिलिन्डर भन्दैमा चार सिलिन्डरभन्दा कम पावर भन्ने हुँदैन । तीन सिलिन्डरको इन्जिनमा आवाज र भाईब्रेसन आउनुको कारण भने माथि उल्लेख गरिएको जस्तै इन्जिनको फोर स्ट्रोकको कारण हो । जसमा कारलाई सुरुमा उठाउदा अलिबढी पावर दिनु पर्छ । यसको लो इन्ड टर्क कम हुने गर्छ ।
उदारणको लागि यदि १२ सय सीसीको इन्जिन छ भने ४ सय सीसीको ३ वटा इन्जिन हुने गर्छ । यसले क्रयाङ्गसाफ्टलाई ३६० डिग्रीको एक राउन्ड घुमाउन १२० डिग्रीको रोटेसनमा पावर दिन्छ। जसका कारण इन्जिनको सुरूकाे पावरमा केही कम महसुस हुने गर्छ साथै सुरुको कम आरपीएममा धेरै भाइब्रेसन महसुस हुने गर्छ तर, कारले स्पीड लिएपछि भाइब्रेसन र साउन्ड खासै महसुस हुँदैन ।
कम्पनीहरुले तीन सिलिन्डर इन्जिन प्रयोग गर्नुका मुख्य कारण यो चार सिलिन्डरको दाँजोमा सस्तो पर्छ साथै हलुका हुने र यसको लङ्गटर्म मेन्टीनेन्स कस्ट पनि निकै कम हुनेछ । यसमा पाट्सनै कम हुने भएकाले पाट्सको फ्रिक्सन पनि कम हुने गर्छ । यसले माईलेज पनि ज्यादा दिन्छ । आजकल यस्तो इन्जिनमा व्यालेन्सर साफ्टको प्रयोग गर्न थालिएको छ । जसले गर्दा आवाज र भाईब्रेसन कम गर्न सहयाेग पूर्याउछ ।
४ सिलिन्डर इन्जिन
याे इन्जिनमा ४ वटा सिलिन्डर प्रयोग गरिएको हुन्छ । चारवटा सिलिन्डर भएको इन्जिन पफेक्ट कम्बिनेसन हो । यसमा इन्जिनको फङ्गसनका फोर स्ट्रोककै क्रममा पालैपालो लहरमा पावर उत्पादन भईरहेको हुन्छ जसले गर्दा क्रयाङ्ग साफ्टको ३६० डिग्रीको रोटेसनमा प्रत्येक ६० डिग्रीमा पावर उपलब्ध हुन्छ । त्यसैले ३ सिलिन्डरको दाँजोमा यो बढी रिफाइन्ड हुने गर्छ ।
यदि ४ सिलिन्डरको पेट्रोल इन्जिन भएको कारमा बसेर स्टार्टमै रोक्नेहो भने क्यावीनमा केही पनि आवाज आउँदैन अर्थात् कार स्टार्टमा छ कि अफ भयो पत्ता लगाउनै गाह्रो हुन्छ । यस्तो इन्जिन स्टार्ट गर्दा भाइब्रेसन र साउन्ड ज्यादै कम आउँछ ।
उदारणको लागि यदि १२ सय सीसीको ४ वटा सिलिन्डरकाे इन्जिन हो भने प्रत्येक सिलिन्डरमा ३ सय सीसीले बाँडिएको हुन्छ । तीन सिलिन्डरको दाँजोमा चार सिलिन्डर भएको इन्जिनमा कम्पोनेन्टनै बढि हुने भएकोले यो अलि महङ्गो र वेट पनि ज्यादा हुने गर्छ । तीन सिलिन्डरको दाँजोमा यसको माईलेज पनि केहि कम हुने गर्छ ।
आधुनीक टेक्नलोजीले गर्दा समान सीसीको ३ वा ४ सिलिन्डरको इन्जिनले दिने पावर बराबरी हुने गरेको छ । यदि तपाईलाई रिफाइन्ड इन्जिन चाहिन्छ भने ४ सिलिन्डरको इन्जिन भएका कार खरिद गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । तर, केही बढि पैसा भने तिर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली बजारमा बी सेग्मेन्ट इन्ट्री लेबलको कारमा हुन्डाईको सेन्ट्रो र सुजुकी स्वीफ्ट, टोयोटा लीभामा ४ सिलिन्डर यूक्त इन्जिनको प्रयोग गरिएको छ ।
त्यस्तै, क्याविनमा आउने केही आवाज र भाइब्रेसनले तपाईलाई फरक पर्दैन भने ३ सिलिन्डरको इन्जिन भएका कार किन्दा पनि फरक पर्दैन । यसको मुख्य फाइदा भनेको माईलेज बढी र मूल्य कम हो । तीन सिलिन्डर भएको इन्जिनले पनि पावर चार सिलिन्डर भएको इन्जिनले जतिनै दिन्छ ।
नेपाली बजारमा ३ सिलिन्डर भएको इन्जिन प्रयोग भएको कारहरुमा सुजुकी सेलेरियो, टाटा टियागो, फोर्ड फिगो, रेनो क्वीड, ड्याट्सन रेडिगो आदि उपलब्ध रहेका छन् ।
यामाहा एमटी-१५ लाई ग्राहक...
सुजुकीको इन्ट्रुडर दुई मह...